'Onja tsunami mampidi-doza': ny horohoron-tany mahery any Venezoela dia niteraka fampitandremana ho an'ny tsunami
Home » Fiarovan-tena amin'ny loza sy loza » 'Onja tsunami mampidi-doza': ny horohoron-tany mahery any Venezoela dia niteraka fampitandremana ho an'ny tsunami
Horohoron-tany mahery 7.3 tanjaka dia namely ny morontsiraka avaratr'i Venezoela, hoy ny USGS.
Horohoron-tany mahery 7.3 tanjaka dia namely ny morontsiraka avaratry ny Venezoela, hoy ny USGS. Ny Ivontoerana fampitandremana tsunami Pasifika dia namoaka fampitandremana ho an'ny faritra amoron-tsiraka ao anatin'ny 300 km amin'ny ivon'ny ivon-toerany.
Ny fidona lalina, nosoratan'i USGS tany amin'ny halavany 123 km, dia tsapa mafy nanodidina ny Helodrano Paria fa nampihontsona ny tranobe koa tao Caracas renivohitra. Na izany aza, raha ny filazan'ny Venezoeliana Fikarohana momba ny fikarohana momba ny seismolojika, dia somary kelikely kokoa ilay horohorontany ary somary marivo kokoa, mirefy 6.3 ny habeny ary latsaka ny iray kilometatra ny halaliny.
Raha mbola eo am-pandinihana ny haben'ny horohoron-tany dia nampitandrina ny PTWC fa "ny onjan'ny tsunami mampidi-doza dia azo atao amoron'ny morontsiraka izay eo afovoan'ny 300 km ny ivon'ilay horohorontany." Azo atao koa ny onja-tsunami amin'ny Grenada mpifanila vodirindrina aminy, ary koa Trinidad sy Tobago, hoy ny PTWC nanampy.
Ankoatra an'i Caracas, nisy fiantraikany teo amin'i Margarita, Maracay, Vargas, Lara, Tachira, Zulia, Maturin ary Valencia, ireo faritra hafa. Amin'izao fotoana izao dia mbola tsy nisy ny aina nafoy na ny fahavoazana.
Mijere video eto.
Fanavaozana ny rivo-doza Lane: nampitandrina ny mpizahatany ny ben'ny tanànan'i Honolulu, ny lisitry ny fiandrasana fiaramanidina